🥇 Nyocha na nyocha nke mmepụta anụ ụlọ
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 236
Video nke nyocha na nyocha banyere mmepụta anụ ụlọ
Dezie ndekọ na nyocha banyere mmepụta anụ ụlọ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye ogo nke nyocha na nyocha nke mmepụta anụ ụlọ, budata ma wụnye ngwọta dị mgbagwoju anya site na otu ndị otu mmepe USU Software. USU Software dị njikere inye gị ngwanrọ dị elu ma n'otu oge ahụ na-efu ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Tụkwasị na nke ahụ, ọtụtụ ọrụ anyị mgbe ịzụrụ ikikere maka ngwanrọ maka nyocha na nyocha nke mmepụta anụ ụlọ na-agụnye ọzụzụ ọzụzụ dị mkpirikpi na enyemaka iji tinye ngwaahịa ịzụrụ. Ndị a bụ ọnọdụ dị mma na-eso, nke pụtara na ọ bara uru ịme nhọrọ maka ịkwado ndekọ na nyocha nke ngwanrọ mmepụta anụmanụ.
A na-aza ajụjụ na nyocha nke mmepụta anụ ụlọ na-enweghị ntụpọ ma ọ bụrụ na ị kpọtụrụ ndị otu mmemme anyị. Anyị ga-enye gị usoro nyocha nke na-anakọta ma hazie ozi gbasara mmepụta anụ ụlọ, yana nyocha ya, mgbe ahụ, a ga-eme ka ndị ọrụ a nwee ikike ịnweta usoro ahụ.
N'ime ngwanrọ anyị maka ịkọ akụkọ na nyocha nke mmepụta anụ ụlọ, enwere nhọrọ maka nkewa ọrụ site na ọkwa nnabata. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ọkachamara nkịtị na-eme omume ha na mmemme ahụ, ha ga-enwe ike ịrụ ọrụ naanị site na ozi ole na ole ha nwere ohere. Ihe omuma a bu ihe omuma nke mmadu choro ka ya na ya mekorita n'oge mmeputa. Livestockdị usoro nyocha anụ ụlọ ndị a na-enye gị ohere ịghọ onye isi na ahịa ahụ ngwa ngwa, bụrụ onye ọchụnta ego na-aga nke ọma.
’Ll ga-enwe ike ijide niche ahịa kachasị anabata, na-achụpụ ndị niile na-asọmpi ma na-ewepụta nnukwu uru dị ogologo oge. Na nyocha na nyocha nke mmepụta nke mmepụta anụ ụlọ, ụlọ ọrụ gị kwesịrị ịdị na-ebute ụzọ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọkwa nke mmata nke ndị nwere ọrụ ga-abụ nke kachasị ekwe omume. Yabụ, mkpebi njikwa ga-abụrịrị ogo ogo. Tụkwasị na nke ahụ, iji mgbagwoju anya anyị na-eme ka o kwe omume ịmụ akụkọ dị iche iche.
Akụrụngwa ahụ na-ewepụta akụkọ ọ bụla ma ọ bụ akwụkwọ ọ bụla ọzọ. Naanị ihe ị ga-eme bụ ịmara onwe gị nke ozi enyere iji nweta nkwubi okwu kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ị na-eme nyocha na nyocha nke mmepụta anụ ụlọ, ị nweghị ike ịme n'enweghị mgbagwoju anya anyị. Sọftụwia a na-agbaso njirimara kachasi ike. Na mgbakwunye, anyị na-ana a nnọọ ezi uche price maka ndị dị otú ahụ a ọma-e mgbagwoju.
’Ll ga-enwe ike iji eserese dị elu na eserese nke ụdị kachasị ọhụrụ. Ojiji ha na-enye gị ohere ịmụ ngwa ngwa ihe ọmụma enyere banyere ọdịdị dị ugbu a. Na eserese, ịnwere ike iwepu ngalaba nke ọ bụla, yana maka eserese, ịnwere ike ịkwụsị ngalaba. Measuresdị omume ndị a na-enyere gị aka ịmụ akụkọ dịnụ n'ụzọ zuru ezu. Mmepụta anụ ụlọ kwesịrị ịnọ n'okpuru nlekọta a pụrụ ịdabere na ya, ị ga-enwe ike ịnye ozuzu anụ ụlọ dị mkpa.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na mmepụta nke mmiri ara ehi mmepụta, anyị mgbagwoju maka aza ajụjụ na analysis ga-kasị adabara ngwá ọrụ. Ekele maka akwụkwọ dijitalụ dijitalụ site na USU Software, ị ga-enwe ike mbupụ akụkọ. Enwere ike ịrụ ọrụ a site na iji ohere iji rụọ ọrụ igwe ojii. A ga-echekwa ozi dị mkpa na mgbasa ozi dịpụrụ adịpụ, nke pụtara na ọ gaghị ewe ohere buru ibu na diski ike nke kọmputa nkeonwe
Anyị na-akwụ ụgwọ dị mkpa maka mmepụta na ozuzu anụmanụ, yabụ, anyị mepụtara ihe pụrụ iche maka nyocha nke usoro mmepụta. Y’oburu n’inwe ahia nke imeputara ya, a gha agha aghaghi aghaghi aghaghi. Wụnye ngwaahịa anyị dị mgbagwoju na kọmputa nkeonwe gị ma ghara ịnwe nsogbu ọ bụla na njikwa ọrụ ọrụ. Ga-enwe ike imekọrịta ihe ngwa nbipute. Site n'enyemaka nke obere mmemme a, ọ ga-ekwe omume ibipụta ọtụtụ akwụkwọ na ihe oyiyi dị mkpa. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na eserese ụwa, ị nwekwara ike ibipụta ha, na-edebe ọnọdụ akara niile na ihe ndị ọzọ na mbiet ahụ.
Na mmepụta, ị ga-abụ onye ndu, ị ga-etinyekwa aka n'ịkọpụta anụmanụ n'ụzọ zuru oke. Enwere ike ịchịkwa mmepụta ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị, a ga-egbu nyocha nke usoro niile na-eme n'ime ụlọ ọrụ na-enweghị ntụpọ. Maka ebumnuche ndị a, naanị ị ga-eji ọrụ nke USU Software, saịtị anyị gafere oke analogs niile amaara na ọnụahịa na ogo.
Site na ịzụta ngwanrọ, ị nwere ihe omume dị elu nke dị n'aka gị nke na-enyere gị aka ịmegharị ngwa ngwa n'ụdị ọfịs ọ bụla. Mee nyocha na nyocha nke usoro niile na-eme n'ime ụlọ ọrụ site na iji ngwaọrụ akpaaka. Site n'iji ngwọta anyị zuru oke, ị ga-enwe ike idekọ ma nyochaa njikwa mmepụta na-enweghị nsogbu ọ bụla. Ofu ihe omuma ihe omuma gha adaba n'aka ndi ahu nwere ikike kwesiri ekwesi ya. Ga-enwe ngwongwo nyocha nke anụ ụlọ kachasị ike iji mụọ akụkọ zuru ezu. Ọzọkwa, sọftụwia a nwere teknụzụ kachasị elu maka iwuli akuko kachasị mma. N'ihi usoro ihe omume anyị dị elu maka nyocha na nyocha nke mmepụta anụ ụlọ, ụlọ ọrụ gị kwesịrị ịdu ahịa. A ga-enwe ohere ịlụ ọgụ na nha anya na ndị mmegide ọ bụla.
N'ihi nnweta ozi ọhụụ na oke ikike ị ga-enweta, ị ga-enwe ike iwulite amụma azụmaahịa ziri ezi.
Ntinye nke mgbagwoju anyị maka nyocha na nyocha nke mmepụta anụ ụlọ bụ usoro a na-arụ site na enyemaka nke ndị ọkachamara USU Software. Mgbe ịzụrụ ikikere maka ụdị sọftụwia a, ịnwere ike ịtụkwasị obi na enyemaka aka ọrụ zuru oke site na otu USU Software.
Anyị agaghị enye gị ọzụzụ ọzụzụ dị mkpirikpi kamakwa ọ ga - enyere gị aka ịwụnye usoro mmemme anụ ụlọ na kọmpụta nke kọmputa.
Site n'enyemaka nke ndị otu anyị, a na-ahazi nhazi ndị achọrọ, yana ntinye mbido abanye na ebe nchekwa PC. Ga-enwe ike ịnagide ajụjụ na nyocha nke mmepụta na-enweghị nsogbu ọ bụla ebe ọ bụ na ọgụgụ isi ga-arụ enyemaka dị mkpa. Soro maapụ ụwa rụọ ọrụ iji soro usoro dị iche iche. Ọ ga-ekwe omume ịkọwa ọkwa ha ma rụọ ọrụ na ihe ngosi ndị a. I nwekwara ike ibudata ụdị nnwale n'efu nke usoro nlekọta anụ ụlọ anyị, nke ezubere maka ịza ajụjụ na nyocha nke mmepụta anụ ụlọ. A na-enye mbipụta demo n'efu, mana ebughị n'obi ya n'ụzọ ọ bụla maka iji azụmaahịa.
Nwere ike onwe gị na n'ụzọ zuru ezu maara onwe gị na interface na ọtọ ọdịnaya nke a software. Ime mkpebi nchịkwa banyere ma ịchọrọ ngwanrọ a ma ọ bụ na ị ga-ajụ ịzụta ya ga-abụ kpamkpam n'aka gị. Ọ bụrụ na ị kpebie ịwụnye ụdị nke ikikere nke ngwa dị elu maka nyocha na nyocha nke mmepụta anụ ụlọ, ịnwere ike ịrụ ọrụ yana isi ahịa. Ga-enwe ezigbo ohere ịza ajụjụ ndị ahịa gị oge niile wee rụọ ọrụ mkpesa na nhazi nke ozi echekwara na draịvụ kọmputa gị.